Filibiinka Reer Maraykan ee Seattle - HistoryLink.org
Filibiinka Reer Maraykan ee Seattle
Maadaama lagu qiyaasay 30,000 (dabayaaqadii 1990dii), bulshada Filibiinka reer Maraykan waxay noqdeen kooxda ugu balladhan ee Aasiyaanka Maraykanka ee Seatte. Laga bilaabo deegaankii reer Filibiin ee la garanayo 1883, mawjado muhaajiriin Filibiiniyiin ah ayaa soo galay iyadoo uu jiray xidhiidh isbed bedelayey marka la eego darajada Filibiin (ka bilaw gumaysi ilaa xornimo). Waxay inta badan la kulmi jireen midab takoor iyo darxumo, sida uu sheegay gabayaaga Filibiiniga Carlos Bulosan (1911?- 1956). Filibiiniyiintu waxay ka qaybqaateen meelaha farshanka, ganacsiga, iyo hogaaminta siyaasadeed. 1979, Delores sibonga (b. 1931) wuxuu noqday xubintii ugu horaysay ee Filibiin ka soo jeeda ee Golaha Magaalada Seattle yeelato. Madaxwayne Bill Clinton wuxuu u magacaabay Bob Santos (b. 1934) inuu noqdo wakiil goboleedka Waaxda Guryaynta iyo Horumarinta Magaalooyinka Maraykanka. 1992, Velma Veloria waxay ku guulaysatay doorasho gudiga sharci dejinta ee Gogolka Washington iyadoo laga soo doortay degmada 11aad ee Seattle, taasoo ka dhigtay iyada sarkaalkii u sareeyey ee la doorto ee ka soo jeeda Filibiino ee markaas joogay wadanka.